Androany dia nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny famandrihana Apple Podcasts | Avy amin'ny mac aho
Farany tonga ny andron'ny Apple Podcasts Subscription Ary ny zavatra azo antoka indrindra dia ny hoe rehefa mamaky ity lahatsoratra ity ianao dia efa hanana ny safidinao ho ampandehanana ao amin'ny fitaovanao Apple ity orinasa ity hijerena ny atiny ao amin'ity fomba famandrihana podcast vaovao ity. Ao amin'ny tranokala paoma ho hitanao ireo vaovao navoaka rehetra.
Ity no fanambarana nataon'i Apple momba ny famandrihana Apple Podcasts:
Ankoatry ny fankafizanao programa maimaimpoana an-tapitrisany dia azonao atao koa ny manohana ireo mpamorona amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana amin'ny atiny. Ka hanana fanampiny toy ny fizarana manokana, doka zero, vaovao amin'ny scoop ary fidirana amin'ny katalaogy iray manontolo, ankoatry ny zavatra maro hafa.
Apple dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fahatongavan'io serivisy io ny 20 aprily lasa teo ary aorian'ity fotoana ity dia efa ananantsika ity serivisy fandoavam-bola ity ho an'ny podcast. Mila manizingizina indray izahay fa ity sehatra fandoavam-bola ity dia hisy fiantraikany manokana amin'ireo mpampiasa rehetra te-hihaino podcast izay manana mpamorona atiny manampy ny fomba famandrihana. Ohatra, ao amin'ny podcast an'ny Soy de Mac sy Actualidad iPhone, amin'izao fotoana izao, ny podcast dia hitohy ho afaka tanteraka.
Mazava ho azy fa ny fiampangana hihaino podcast dia mety ho sabatra roa lela, satria mpampiasa maro no mahita tsara ireo fomba famandrihana ireo ary maro hafa tsy dia be loatra. Azontsika atao ny milaza fa fomba iray hampiasana matihanina podcast fa tsy maintsy marihina koa fa ny fampidirana vola isam-bolana na famandrihana dia tsy midika hoe hivoatra be ity podcast ity. Ho an'ireo izay manontany tena, Apple dia manolotra ny serivisy fotsiny dia tsy handray komisiona amin'ireo podcast ireo izay manampy ny fomba famandrihana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Androany dia nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny famandrihana Apple Podcasts